Wararka - Cajaladda ridaya waxay ka kooban tahay lakabyo badan oo ah marooyin khaas ah oo gaar ah oo lagu miiro cusbi.
Cajaladda ridaya waxay ka kooban tahay lakabyo badan oo ah marooyin khaas ah oo gaar ah oo lagu miiro cusbi.
1.Qalafsanaan sare iyo miisaan fudud: adkaanta kabniinka ka dib markuu bogsado waa 20 jeer ka badan kan malaas dhaqameed. Muuqaalkani wuxuu hubiyaa in la isku halleyn karo oo la adkeyn karo ka dib dib u hagaajinta saxda ah. Qalabka hagaajintu waa yar yahay culeyskiisuna waa fudud yahay, oo u dhigma 1/5 miisaanka nuuradda iyo 1/3 dhumucda taas oo ka dhigi karta aagga ay dhibaatadu saameysey inuu yareeyo culeys yar, yareeyo culeyska jimicsiga shaqeynaya ka dib hagaajinta, fududeynta wareegga dhiigga iyo dhiirrigelinta bogsashada.
2. Hawada oo hawo wanaagsan leh: Faashaddu waxay isticmaashaa dun tayo sare leh oo ceyriin ah iyo tikniyoolajiyad mesh tiknoolaji ah oo leh hawo hawo wanaagsan.
3.Xawaaraha degdegga ah ee adag: Nidaamka adkaanshaha ee faashaddu waa dhakhso. Waxay bilaabataa inay adkaato 3-5 daqiiqo ka dib furitaanka xirmada waxayna culeyska ku qaadi kartaa 20 daqiiqo halka faashadda malaasatada ay qaadaneyso ilaa 24 saacadood si ay si buuxda u adkaato oo u qaadato culeyska.
4. Gudbinta raajada oo aad u fiican: Faashaddu waxay leedahay faafin shucaac oo aad u fiican saameynta raajada waa mid cadaan ah taas oo ka caawinaysa dhakhtarka inuu fahmo bogsashada xubinta ay dhibaatadu gaadhay wakhti kasta inta lagu jiro hawsha daaweynta.
5.Caabbinta biyaha wanaagsan: Ka dib marka faashadda la adkeeyo, dusha sare waa mid siman oo heerka nuugista qoyaanka ayaa 85% ka hooseeya balastarka. Xitaa haddii addimada ay dhibaatadu saameysey ay biyo gaadhaan, waxay si wax ku ool ah u xaqiijin kartaa in aagga ay dhibaatadu saameysey ay qalalan yihiin.
6. Si fudud loo shaqeeyo, dabacsanaan, caag wanaagsan
7.Raaxo iyo badbaado: A. Dhakhaatiirta, (qaybta jilicsan ayaa leh dabacsanaan wanaagsan) muuqaalkani wuxuu ka dhigayaa mid ku habboon oo wax ku ool ah dhakhaatiirta inay dalbadaan. B. Bukaanka, faashaddu waxay leedahay foosha yar mana soo saari doonto calaamadaha aan raaxo lahayn ee maqaarka cidhiidhiga iyo cuncunka ka dib faashadda malaasatada ay qallajiso.
8.Baahiyo kala duwan oo codsiyo ah: hagaajin dibedda ah oo lafa-beel ah, orthopedics loogu talagalay orthopedics, qalabka waxqabadka ee kaabayaasha ah ee qalabka taranka iyo qalabka taageerada. Istiraatikada deegaanka ee waaxda gubashada.